Knowledges Zone: April 2011
ကျွန်တော်လဲဘယ်ကရမှန်းမသိတော့်ဘူးဗျ ဆော့်ဝဲလ်တွေ install လုပ်ရင်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် ။
၀င်းဒိုး Xpကို သုံးနေတဲ့သူအတွက်သတင်းကောင်းလေးပေါ့…
Xpကို ၀င်းဒိုး7နှင့် 8 စတိုင်ပြောင်းရတယ်ဆိုလို့စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်…..
အဲဒါကတော့….OfficeRecovery 2008 Ultimate Enterprise
Recovery for Word - Recovers Word documents
ဘာလို့လည်းဆိုတော့…သူ အော်တို.. Downloads လုပ်ပေးပါတယ်
သူကို..Run လိုက်ရင်….Mozilla Firefox မှာ Adds-ons လေးတစ်ခုရမှာ
Free Downloads့ လုပ်တဲ့လိပ်စာတော်တော်များများမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်
တိုက်ရိုက် Downloads လုပ်ရပါတယ်…ဒါမှမဟုတ်..
ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့လင့်မှာလည်း Downloads လုပ်လို့ရပါတယ်…
Windows Activation Trial Day 30 ကို 120 Day တိုးနည်း
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အသုံးဝင် အသုံးတည့်လှတဲ့ နည်းလေး ဝေမျှပေးပါအုံးမယ်။ Windows7တင်ထားတဲ့ Trial version တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ရက် (၃၀) သာ အလကားပေးထားပါတယ်။ ရက် (၃၀) ကျော်သာနဲ့ သူငယ်ချင်းများအနေနဲ့ Key မရှိလို့ Loader တွေနဲ့ crash လုပ်စရာမလိုဘဲ 30 Trial ကို 120 Trial ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် (တစ်) လ အလကားပေးသုံးတာကို (သုံး) လ အလကား ရအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးလ အတွင်းမှာ Microsoft က ပေးတဲ့ update တွေကို update လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးလ ကျော်ရင်တော့ ထပ်တိုးလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ Windows ရဲ့ product key number ကို ထည့်ရင်ထည့် (သို့မဟုတ်) Activation Loader နဲ့လုပ်ရရင် လုပ် လုပ်လို့ မရရင်တော့ uninstall လုပ်ပြီး Windows ပြန်တင်။ ပြီးတာနဲ့ Trial ကုန်ဖို့ တစ်ရက် အလိုမှာ အခုတင်ပြတဲ့ နည်းကို သုံး ဒါဆို အဆင်ပြေမည်။
၀န်ခံချက်။ ။ ကျွန်တော်စက်လဲ Trial သုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ဘဲ တိုးသုံးနေပါတယ်။ ကျွန်တော် စက်မှာ တိုးစဉ်မှာ ပုံမရိုက်ခဲ့ရလို့ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်စေချင်တာနဲ့ ပုံ (၁) နှင့် ပုံ (၂) ကို အွန်လိုင်ကနေ ယူထားပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ တစ်ကြိမ်တိုးရင် ရပ်ပေါင်း (၃၀)သာ တိုးပါမည်။ ဒါကြောင့် 1 Day ရောက်တာနဲ့ ဒီနည်းကို အသုံးပြုပါ။
3 (rearms) x 30 (days) = 90 (days extended) + 30 (default days) = 120 days
My computer ကို Right click ထောက်ပြီ Properties ကို ၀င်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Trial ကုန်ဖို့ တစ်ရက်အလိုက ပုံ
Trial တစ်ရက် အလိုကို 30 day ပြောင်းပြီးနောက် ပုံကို လေ့လာပါ
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
Start >> Search Box မှာ cmd လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ cmd ပေါ် Right click ထောက်ပြီး Run as Administrator ကို click လိုက်ပါ။ ပုံကိုကြည့်ပါ။
အောက်ပါ code ကို ရိုက်ပါ။ command prompt မှာ slmgr -rearm ကို ရိုက်ပြီ Enter ခေါက်ပါ။
Windows Script host Box ကျလာပါမည်။ OK ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ မိမိ computer ကို Restart ချလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် Trial 30 day ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
့သယ်ရင်းတို့ ကို World'leading လို့ အမည်ရတဲ့
ကမ္ဘာ့ကောင်းဆုံး Dictionary လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်၊
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Languages ပေါင်း 75 ခုကျော်နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားတယ်..၊
word တစ်ခုကိုလည်း Oxford , longman , Wekipedia ,Dream စတဲ့
ကိုကြိုက်တဲ့ Dictionary အဖွင့်တွေနဲ့ ကြည့်လို့ ရတယ်၊
ပြီးတော့ မြန်မာလိုပါကြည့်လို့ ရသေးတယ်။ ကိုလိုချင်တဲ့ Language ကိုလည်းထပ်ပေါင်းလို့ ရပါသေးတယ်၊ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်ဗားရှင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့စုံလည်းစုံ/လှလည်းလှပါတယ်။
အောက်ကတော့သူ့ Features တွေပေါ့။
Babylon Pro 9.0.1.5
အရင်ကကျနော် Trial အနေနဲ့ ပဲသုံးရတော့ ရက်ကုန်ခါနီးရင်
အရမ်းစိတ်ပျက်ရတယ်၊ (ကျနော့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုး)အခုတော့ ......အဲ့ဒါတွေကင်းဝေးသွားပီ...............
..ဖူဂျီနဲ့ ရှော်လိုက်လို့ ....
....အာာာာ........ဟုတ်ပါဝူးးးးးးး.....( ရောင်ကုန်ပီ )
ဒီနေ့ သယ်ရင်းတို့ ကိုလက်ဆောင်ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေတာ၊
ဘာရယ်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ သယ်ရင်းတို့် ကိုခင်လို့ ချစ်လို့ ပေါ့။
ဒီဆောလ်ဝဲလေးက Internet Speed ကိုမြှင့်ပေးတဲ့ဆော်လ်ဝဲလေးပါ........
ကောင်းတယ်..............သူ့Functions တွေကလည်းလှတယ် ။ မြန် /မမြန်ဆိုတာတော့ ......ထပ်မကြွားတော့ပါဘူး။
Folder ထဲမှာ နှစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးပီး ( ကိုယ့် Window က 64 ဆို 64 ပေါ့)
ပုံမှန်အတိုင်း Run လိုက်။
ပီးရင် ရက် ၃၀ Trial ပေးလိုက်မယ်။
အထဲမှာ Trial reset ပါတယ်၊
ကုန်ခါနီးရင် Trial reset ပြန်နှိပ်ပီး ရက်၃၀ ထက်ယူပေါ့။
အောက်မှာ ဒေါင်းလို့ လင့်က။
အရင်လင့်က passwords protect လုပ်ထားတယ်ပြောလို့ ( ကျနော်မေ့နေတယ်)
အခုလင့်တစ်ခုထပ်တင်ပေးထားတယ် ( တောင်းပန်ပါတယ်)။
အခုလင့်passwords မပါဘူးး
အရင်လင့်ကိုဒေါင်းပီသူတွေအတွက် Passwords လိုရင် : ဒါကိုစမ်းကြည့်လိုက်.......knickplace.blogspot.com
Avira ရဲ့ promotion လိပ်စာလေးကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါ
ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုစက်ထဲမှာ Run လိုက်ပါ........install လုပ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ.....သူငယ်ချင်းတို့ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့.
.Run ပြီးတော့...next တွေကိုသာကလစ်သွားပါ....အောက်ကပုံစံအတိုင်းသွားပါ
နောက်ပြီးတော့ Avira မှာအကောင့်ဖွင့်ပါမယ်............ Your Email ID လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာ.....မိမိရဲ့အကောင့်အမှန်ကိုရိုက်ထည့်ပါ.......
ကိုယ်နှစ်တဲ့နစ်နိမ်းလေးဖြည့်လိုက်ပေါ့......ပြီးရင်တော့ nextကို ကလစ်နိုပ်လိုက်ပါ....(မှတ်ချက်....အင်တာနက်ချိတ်ထားရပါမယ်.)..
English versionမှာဘဲသုံးမယ်လေ..ဒါကြောင့်.....hbedv.key file ကိုယူရအောင်.....
ထဲကိုဝင်ပြီးပါ.......ပြီးတော့ Forgot password ဆိုတာလေးကိုကလစ်လိုက်ပါ...နောက်ပြီး Your Email I(မိမိအကောင့်)
ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း hbedv.key file ကိုဒေါင်းလုပ်လိုက်ပါ....ဒါဆို hbedv.key file ရပြီပေါ့.........
English versionသုံးပြုရအောင် Avira Premium Security Suite 10
ကိုဒေါင်းလုပ်လိုက်ပါ....ပြိးတော့စက်ထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ....nextကို ကလစ်ပြိးအခုလိုပုံပေါ်လာတဲ့အထိ
ပြီးရင် hbedv.key file ကိုအသုံးပြုမယ် (ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကလစ်ပြီး....မိမိဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ hbedv.key file ကိုထည့်လိုက်ပါ)
လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးတဲ့အထိကလစ်နိုပ်လိုက်ပေါ့......ရက်ပေါင်း 184 Days အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
သူရဲ့ promotion March လ 28 ထိဘဲခင်ဗျာ............အဆင်ပြေကြပါစေ................
အခုလို လုပ်ဆောင်ချက်...1 ကိုလုပ်ရ ပျင်းတဲ့သူတွေအတွက်.....
ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ hbedv.key file ကိုဒေါင်းလုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် “hbedv.key” file (သို့) mediafire
အိမ်မှာအင်တာနက်မချိတ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်..Updateကို ..softpedia.comအော့လိုင်းUpdate မှာသွားပြီးတော့....ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Kasper sky Internat Security 2012 v.12.0.0.19 (BETA VERSION)
ဟောဒီမှာ Kasper sky Internat Security 2012 တဲ့ဗျာ၊ စမ်းတောင်မကြည့်ရသေးပါဘူး၊
ဆိုဒ်တခုမှာတွေ့လို့ ဒေါင်းပြီး ပြီးချင်းတင်ပေးလိုက်တယ်၊
2012 series lab ready to start beta testing and the interface quite simple,
green and white against the background of each other, looking very comfortable feeling,
the following is the product of user interface Secret:
mediafire ။ ifile.it ။ 4shared
့http://Rblog မှ copy လုပ်ပြီတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော့ထက်တော်တဲ့ သူများ ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်သည်။
iphone နှင့် ipod ထဲကို zawgyi font သွင်းရင် အလွယ်ဆုံးနည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
စက်ထဲတွင် cydia ဆိုတဲ့ program ရှိရပါမည်။ ထို program ကိုဖွင့်လိုက်ပါ.ပြီးရင် အောက်မှာရှိတဲ့ teskbar တွင် manage ကိုဝင်ပါပြီးနောက် sources ကိုထပ်ဝင်ပါ ထို့နောက် အပေါ်ထောင့် နားတွင် Edit ကိုနိပ်ပါ ပြီးနောက် add ကိုထပ်နိပ်ပါ ထိုင်တွင့် Http:// ကွက်လပ်လေးပေါ်လာပါမည် ထိုကွက်လပ်တွင် http://www.cydia.macforus.com/ ထည့်ပြီး add ကိုနိပ်ပါ ထို့နောက် အပေါ်တွင်ရှိမည့် done ကိုနိပ်ပါ.ထိုအခါ sources ထဲတွင် cydia.macforus ဆိုတဲ့ program adder လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ်မည် အဲ့ဒီ့အထဲကို ဝင်လိုက်ပါက zawgyi keyboard နှင့် zawgyi font ၂ နှစ်ခု သို့ ၄ ခုပေါ်လာပါမည်.ဘယ်လိုဘဲပေါ်စေကာမူ zawgyi keyboard နှင့် zawgyi font နှစ်ခုပဲ သွင်းရပါမည် ပထမ zawgyi font ကိုအရင် install လုပ်ပါ ပြီးနောက် back ပြန်လာပြီး zawgyi keyboard ကိုထပ် install လုပ်ပါ ထို့နောက် springboard
လုပ်လိုက်ပါ.ဤတွင် ဇော်ဂျီ font သွင်းလို့ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ. ထို့နောက် lauguage ထဲရှိ ikeyboard ထဲတွင်ပြင်ဆင်၍ဇော်ဂျီ font ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီခင်ဗျားးးးး
ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံနှင့် video record လုပ်မယ်။
ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ ရှိသမျှပုံတွေကို ဓာတ်ပုံအဖြစ် လိုအပ်သလိုရိုက်ယူဖို ဒီဆော့ဝဲကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံသာမကပဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်အဖြစ်ပါ recording ရက်ကော့ဒင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူပါ ။ 1.66 MB ပဲရှိပါတယ်။
ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် နောက်တနေရာ Ifile ကနေဒေါင်းယူပါ http://ifile.it/ya5pfdq
ဆော့ဝဲကို Rar ဖိုင်နဲ့တင်လို့ ရတာကြောင့် ဒေါင်းလုလုပ်ပြီးရင် WinRAR နဲ့ဖြေမှရမှာပါ။ ဆော့ဝဲဖိုင်ကို ထုတ်ယူပြီးရင် RUN ရမ်းစရာမလိုပါဘူး ။ Portable ဖိုင်ဖြစ်တာကြောင့် memory မန်မိုရီစတစ်ထဲမှာ ထည့်ယူသွားလို့ ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင် အစိမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ပုံ FSCapture ဆိုတာကို double click နှစ်ချက် ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ ။ စက်ခရင်ပေါ်မှာ အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာမယ်။
- အဖြူရောင် မျှားနံပါတ်(၁) ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် စက်ခရင်ပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ ဝင်းဒိုးဘောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသားရပါလိမ့်မယ်။
- အဝါရောင် မျှားနံပါတ်(၂)ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် မိမိလိုချင်တဲ့ ဝင်ဒိုးဘောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသားရပါလိမ့်မယ်။
- အနီရောင် မျှားနံပါတ်(၃)ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရက် စက်ခရင်ပေါ်က မိမိအလိုရှိရာ နေရာက စပြီးတော့ ကြိုက်သလိုဆွဲယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ( ဒီနည်းကို အသုံးများပါတယ် )
- အပြာရောင် မျှားနံပါတ်(၄)ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် စက်ခရင်တခုလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသားရပါလိမ့်မယ်။
- အစိမ်းရောင် မျှားနံပါတ်(၅)ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် Firefox မှာဖွင့်ထားတဲ့ ဘလော့စာမျက်နှာတခုလုံးကို
Scroll bar ဆွဲစရာမလိုပဲ အောက်ဆုံးထိဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသားရပါလိမ့်မယ်။
- ခရမ်းရောင် မျှားနံပါတ်(၆)ကတော့ ဗီဒီယိုဖိုင် ရီကောဒင်းဖြစ်ပါတယ်။ VZO / skype / Video chat စက်ခရင်ပေါ်မှာ ဗွီဒီယို -chat အားလုံးကို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ မောင်- များအတွက်
အကြိုက်ပေါ့ဗျာ ။ ဒီဆော့ဝဲနဲ့မှတ်တမ်းတင်လို့ ရတယ်ဆိုတာလဲ မော်ဒယ်လေးများ သိကြပါကုန်.......။
အဲဒီမျှားနံပါတ် (၆)ကို နှိ်ပ်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာမယ်။
မိမိလိုချင်တဲ့ နေရာကိုပဲရွေးပြီး မှတ်တမ်းတင်ချင်လို့Rectangular Area ကိုပဲ ရွေးထားပါတယ်။
အနီရောင်နဲ့Record ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးပါ။ Start ဆိုတာလုပ်လိုက်ရင် မှတ်တမ်းတင်နေပြီပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ Stop ဘေးမှာ အနက်ရောင်အကွက်လေးကို နှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ အဲတာဆိုရင် ဘေးမသီရန်မခပဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်တခု မှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားဘီပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ရလာတဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်က ကြီးနေသေးတယ်မလား။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ပြန်ချုံ့ ပြီး ဘလော့ပေါ် တင်ချင်တယ် ဆိုပါတော့....။
Crooner တင်ထားတဲ့ ဒီဘလော့မှာဝင်ဖတ်ပြီး http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/cd-or-dvd-format ဒေါင်းယူလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ အဲဒီဆော့ဝဲက အားလုံးကို ဖောမတ်ပြောင်းပေးလို့ ရတယ်။
- အပြာနုရောင် မျှားနံပါတ်(၇)ကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေကို ဘယ်လိုဖိုင်နဲ့သိမ်းထားချင်လည်း ဆိုတာရွေးခိုင်းတာပါ။ To Editor ကိုရွေးပြီး SAVE ဆေ့လုပ်လိုက်တာ အလွယ်ကူဆုံးပေါ့ဗျာ။
သုံးဖူးသူတွေတော့ သိကြပါတယ် မသုံးဖူးသူတွေတော့ မသိဘူးပေါ့....း)
Advanced SystemCare Pro 3.8.0.745 ပါတဲ့ latest Version ပါ Portable လေးတွေ့တာနဲ့ ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျားး...။
The World’s Top System Utility ပါတဲ့ System error တွေကို အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ fix လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
PC care တွေမျိုးစုံအောင် သုံးဖူးတာတွေထဲကမှ အကြိုက်တွေ့မိတဲ့ တစ်ခုပါပဲ ကွန်ပျုတာတွေမှာ မရှိမဖြစ်ရှိသင့်တဲ့ Software ပါလို့လည်း ထောက်ခံပေးလိုက်ပါရစေ...။
Portable လေးပဲဆိုတော့ Install လုပ်စရာလည်း မလိုဘူးနော် serial ပါပြီးသားပါ...။
ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာတော့ အောက်မှာ ကြည့်သွားလိုက်ကြပါ...
ဒီနေရာလေးမှာ သွားရောက် Download ယူကြပါခင်ဗျာ